အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း ကြိုးလက်ကိုင်ပါသော ခရစ္စမတ် စက္ကူအိတ် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | လန်းဟိုင်း
ကြိုးလက်ကိုင်ပါသော ခရစ်စမတ် Kraft စက္ကူအိတ်ကို စိတ်ကြိုက်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း။
ပစ္စည်း: 120-250gsm kraft စက္ကူ
လက်ကိုင်- လိမ်/ပြားသော စက္ကူလက်ကိုင်/ကြိုးလက်ကိုင်/ဖဲကြိုးလက်ကိုင်/စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် ကြိုးလက်ကိုင်ပါသော ခရစ်စမတ် Kraft စက္ကူအိတ်ကို စိတ်ကြိုက်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း။
ပစ္စည်း 120-250gsm kraft စက္ကူ
အနည်းဆုံး အမှာစာ 1000pcs
ပို့ဆောင်ချိန် 2-5 ပတ်
ထုပ်ပိုးခြင်း။ OPP အိတ်တွင်ထုပ်ပိုးထားသော 200 အပိုင်းပိုင်းအိတ်တစ်ပုံးတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
2. လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါမည်။
3. သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် မတူညီသောပစ္စည်း၊ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် စသည်တို့ပါရှိသော ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး
4. More 16 နှစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ
5.Skillful workers နှင့် ထိရောက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုများသည် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် လျင်မြန်စွာ ပေးပို့ခြင်းတို့ကို သေချာစေသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုပ်ပိုးမှုထုတ်ကုန်ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးမှုနယ်ပယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား PVC အိတ်များ၊ အထည်အိတ်များ၊ စက္ကူအိတ်များ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ အခြားဆက်စပ်ထုပ်ပိုးမှုထုတ်ကုန်များနှင့် ထုပ်ပိုးမှုအရန်ပစ္စည်းများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နေရာတည်းတွင် စက္ကူထုပ်ပိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်အဖြစ် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။
• စျေးနှုန်းကို အရေအတွက်၊ ပစ္စည်း၊ အပြီးသတ်နည်းများ၊ အရွယ်အစားနှင့် အခြားအချက်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်မပြတ်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အချို့သည် အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းရှိသည်၊ သင်အလိုရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
3. နမူနာများ နှင့် နမူနာပေးပို့ချိန် မည်သည်တို့ကို ပေးဆောင်နိုင်သနည်း။
• သေချာပါသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့နမူနာများကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်သည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်နမူနာအတွက် နမူနာအခကြေးငွေ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
• နမူနာထုတ်ကုန်သည် ၃-၇ ရက်ခန့် ကြာလိမ့်မည်။
• အော်ဒါအရေအတွက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်အရ7ရက်မှ 20 ရက်အတွင်း။
5. ကျွန်ုပ်၏ထုပ်ပိုးမှုထုတ်ကုန်များအတွက် အခမဲ့ဒီဇိုင်းကို ပေးနိုင်ပါသလား။
• ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနှင့် လွယ်ကူသောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
6. ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းပုံစံကို သင်လက်ခံမည်နည်း။
• AI၊ CDR၊ PDF၊ PSD၊ EPS၊ မြင့်မားသော pixel JPG သို့မဟုတ် PNG။
7. ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သို့ပို့ဆောင်မည်နည်း။
• သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း ပင်လယ် သို့မဟုတ် လေဖြင့်။
• သင့်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင် forwarder ရှိပါက အလုပ်ဟောင်း သို့မဟုတ် FOB ။
• CFR သို့မဟုတ် CIF စသည်တို့ကို သင့်အတွက် ပို့ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုအပ်ပါက၊
• DDP နှင့် DDU တို့ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
• နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ရွေးချယ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမည်။
8. ဘယ်လိုငွေပေးချေမှုကို လက်ခံပါသလဲ။
• T/T၊ ခရက်ဒစ်ကတ်၊ PayPal၊ West Union၊ MoneyGram၊ L/C၊ ငွေသားစသည်ဖြင့်။
9. သင်သည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သည်လား။
• ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ရှန်ဟိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။
10. တိကျသော ကိုးကားချက်တစ်ခုရလိုပါက ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အချက်အလက်ကို ပေးသင့်သနည်း။
• အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်း၊ စက္ကူအထူ၊ ပုံနှိပ်စက်အသေးစိတ်၊ ပြီးစီးမှု၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ အရေအတွက်၊ ပို့ဆောင်မည့်နေရာ စသည်တို့။
• သင့်လိုအပ်ချက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကုန်ပစ္စည်းကို အကြံပြုပါမည်။
ယခင်- လိမ်/ပြား စက္ကူလက်ကိုင်ပါသော Kraft စက္ကူကော်ဖီအိတ်
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက် poly ဇစ်သော့ခတ်ထားသော အေးခဲနေသော ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးဇစ်အဝတ်အထည် EVA အတွက် ရှုံ့ထုပ်ပိုးအိတ်
အညိုရောင် Kraft စက္ကူအိတ်
ခရစ္စမတ် Kraft စက္ကူအိတ်
Kraft Paper Bag အစိမ်းရောင်
စျေးဝယ် Kraft စက္ကူအိတ်